Mbola ho Voafehy Ihany ve Izao Tontolo Izao?
NAHAKIVY ny fanambarana nataon’ny mpahay siansa, tamin’ny Janoary 2017. Tsy mbola notandindomin-doza hoatr’izao mihitsy, hono, ny tontolo misy antsika, tato anatin’ny 60 taona mahery. Nampiasa an’ilay hoe Famantaranandro Manondro ny Fara Andro izy ireo, mba hampisehoana hoe kely sisa dia ho potika izao tontolo izao. Narosony 30 segondra ny fanjaibe amin’izy io, ka afaka roa minitra sy sasany dia tonga eo amin’ny misasakalina, na ny fara andro.
Hojeren’ny mpahay siansa indray rehefa mingadona ny 2018, raha mihamanakaiky ny faran’izao tontolo izao. Hanondro indray ve ilay famantaranandro hoe efa ambivitra ny loza iray tsy roa aman-tany? Ahoana ny hevitrao? Tsy voafehy intsony ve izao tontolo izao? Mety ho sarotra aminao ny hamaly an’izany, satria na ny manam-pahaizana aza tsy mitovy hevitra. Tsy ny rehetra koa no mino hoe ho potika izao tontolo izao.
Olona an-tapitrisany mantsy no manantena hoavy mamirapiratra. Manana porofo, hono, izy ireo hoe tsy ho potika mihitsy ny tany, hisy olona hiaina foana eto, ary ho tsara be ny fiainana. Marim-pototra ve ny porofo ananany? Mbola ho voafehy ihany ve izao tontolo izao?
‘Ilay hoe Famantaranandro Manondro ny Fara Andro, dia famantarana nifanarahan’ny firenena maro mba hampisehoana raha efa madiva handringana ny mponina eto an-tany ny olombelona na tsia. Tena mampidi-doza mantsy ny teknolojia sasany noforonin’ny olona, indrindra fa ny fitaovam-piadiana niokleary. Eo koa ireo teknolojia mahatonga ny fiovaovan’ny toetrandro, sy ireo ampiasana sela na bakteria, ary ireo ampiasana Internet, izay mety hitera-doza ho an’ny tany sy ny fiainana eto, na iniana atao izany na tsia.’—Gazetin’ny Mpahay Siansa Momba ny Ataoma (anglisy).